Alshabaab oo weerar khasaare geystay xalay ku qaaday Xerada Milateriga Laanta-buuro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo weerar khasaare geystay xalay ku qaaday Xerada Milateriga Laanta-buuro
A warsame 21 March 2016 21 March 2016
Mareeg.com: Wararka ka imanaya Gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in Al-Shabab ay weerar culus xalay ku qaadeen saldhigga miltari ee ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Laanta Buuro.
Weerar kale ayaa la sheegay inay Al-Shabab ku qaadeen saldhigga Shanta Golaha Sare oo u dhow Laanta Buur.
Al-Shabab maleeshiyadooda ayaa wararku sheegayaan inay laba dhinac kasoo weerareen, khasaare culusna uu halkaas ka dhacay.
Ciidanka saldhigga joogay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin Guutada Shanaad.
Wararka ay sheegaya inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh. Sidoo kale waxa wararku sheegayaan in baabuur tikniko ah ay u gacan galeen Al-Shabab.
Al-Shabab ayaa la sheegay inay baabuurtaas la aadeen dhinaca magaalada Awdheegle oo ah deegaan dhanka Koonfur Galbeed kaga beegan Afgooye, ayna horay uga soobaxeen ciidanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Waxey Akshabaab baraha ay ku leeyihiin Internet-ka ku sheegeen iney halkaas ka qaateen 7 gaari oo kuwa dagaalka ah, 1 booyad iyo 1 gaari oo Carib, halka ay sheegeen iney gubeen gaari ciidan oo cilladoobay.
Ururka Al-Shabab ayaa sheegay inay hub iyo saanad kale ku qabsadeen weerarka. Al-Shabab waxay kaloo sheegatay inay dishay tobanaan askari laakiin si madaxbannaan looma xaqiijin seegashadaas.
Taliye ka tirsan dawladda ayaa beeniyey inay ciidan tiradaas le’eg ka dhinteen.
Alshabaab ayaa war ay soo saareen kula jeesjeesay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ku sheegeen mid ciidankeedu aad u liito, iyagoo xusay in ciidanka ay ku weerareen Laanta Buuro uusan helin wax gurmad ah.
Sawirro: Obama oo booqasho taariikhi ah ku tegay dalka Cuba